FOCUS Beauty ရဲ့3Months Trip လေးတွေ Target ပိတ်ဖို့ (၁၈)ရက်ပဲလိုပါတော့တယ်။ 24/7 Tooth Balance ရဲ့ ကလော-အင်းလေး, New Skiin Foam Cleanser ရဲ့ Chaiang Mai နဲ့ Snail Wish Whitening Cream, New Skiin All In One Tone Up Cream, New Skiin Skin Reborn Solution, Better Skin Coffee Soap Scrub တို့ရဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya ကမ်းခြေ ခရီးစဥ်တွေ ဒီလ November မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 2020 September လမှ November လအတွင်း - 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေး ဘူး ၃၀၀၀ ရောင်းချတိုင်း ကလော အင်းလေး Luxury Trip သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ - New Skiin Supplement ဘူး 1000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ - Better Skin Soap အတုံး 5000 ရောင်းချသော Agent တိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ - New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် ၁၀,၀၀၀ ရောင်းချသော Agent တိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya ကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ်တစ်စောင် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ - Snail Wish Whitening Cream ဘူး ၁,၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ - New Skiin Foam Cleanser ဘူး ၂,၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင် ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent တစ်ယောက်ကို လက်မှတ်ဘယ်နှစောင် ရနေကြပြီလဲ? တွေးရင်း ရင်ခုန်နေပါပြီ ?
New Skiin All In One Tone Up Cream Pattaya3Months Target Trip လေးပြန်လာပါပြီ ? 2020 September, October, November3လအတွင်း New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် ၁၀,၀၀၀ ရောင်းချသော Agent တိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ Pattaya ကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ်တစ်စောင် ရရှိမှာပါ ? Agent တိုင်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့နော် ?
Snail Wish Whitening Cream ရဲ့3Months Target Trip က Pattaya တဲ့နော် ? 2020 September မှ November3လအတွင်း Snail Wish Whitening Cream ဘူး ၁,၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent တစ်ယောက်ကို လက်မှတ်ဘယ်နှစောင် အရယူကြမလဲ? Agent တိုင်းရဲ့ စွမ်းအားရင် ယုံကြည်ပြီးတော့ ပတ္တရားခရီးစဉ်မှ စောင့်မျှော်နေပါတယ် ?
24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေးရဲ့ ၃ လ Target Trip လာပါပြီ ? 2020 September လမှ November လအတွင်း 24/7 Tooth Balance သွားတိုက်ဆေး ဘူး ၃၀၀၀ ရောင်းချတိုင်း ကလော အင်းလေး Luxury Trip သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Focus Beauty က Luxury Trip တွေပဲ စီစဉ်ပေးတာဖြစ်လို့ ခရီးစဉ်လက်မှတ်တွေ အရယူဖို့ ကြိုးစားလိုက်ကြရအောင်နော် ?
New Skiin Skin Reborn Solution ရဲ့ Target Trip က ဒီ August နောက်ဆုံးနော် ✈️ 2020 June လ မှ August လအတွင်း New Skiin Skin Reborn Solution ဘူး ၁၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Target လေးပြည့်အောင် ကြိုးစားကြမယ်နော် ?
Snail Wish Whitening Cream ❤️ Target Trip ❤️ က August လ နောက်ဆုံးနော် ✈️ 2020 June လ မှ August လအတွင်း Snail Wish Whitening Cream ဘူး ၁၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Target လေးပြည့်အောင် ကြိုးစားကြမယ်နော် ?
New Skiin All In One Tone Up Cream ရဲ့ ၃ လ Target Trip က August လ နောက်ဆုံးဆိုတာ မမေ့နဲ့နော် ✈️ 2020 June လ မှ August လအတွင်း New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် ၁၀၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Target လေးပြည့်အောင် ကြိုးစားကြမယ်နော် ?